Leave a Comment on TÉLÉCHARGER BAIBOLY KATOLIKA PDF
Moa mba fantatrareo va Labana, zanakalahin’i Nahora? Ity antontam-bato ity no vavolombelona amintsika anio. Rehefa fito ambin’ny folo taona Josefa, dia niara-niandry ondry tamin’ny rahalahiny izy fa mbola zaza izy , dia tamin’ny zanak’i Bila sy ny zanak’i Zilpa, vadin’i Jakoba rainy; ary Josefa nitati-bolana tamin-drainy. Ary hoy izy tamin-dravehivavy: Tsia, fa hizaha ny fangadihadin’ny tany no nahatongavanareo.
Aiza moa ilay vehivavy janga izay tamoron-dalana teo Enaima? Andrao hisy loza hanjo azy. Quelques corrections et mises-à-jour ont été effectuées pour rendre plus facile la compréhension et la lecture. Indro, ny tompoko tsy mahalala izay tandremako ato an-trano, fa izay rehetra ananany dia efa natolony ho andraikitro avokoa. Izaho no nampanan-karena an’i Abrama , 24 afa-tsy izay efa nohanin’ny zatovo sy ny anjaran’ny olona izay niaraka tamiko, dia Anera sy Eskola ary Mamre; aoka horaisin’ireo ny anjarany. Hitako ny tarehin’ny rainareo, fa tsy mba miramirana amiko tahaka ny taloha; fa Andriamanitry ny raiko no efa nomba ahy. Tononkira Malagasy Sans Code.
La présente page de téléchargement du fichier a été vue fois. Ny Baiboly – Tenin’Andriamanitra. Ary ny fanahin’Andriamanitra nanomba tambonin’ny rano. Misia mazava; dia nisy mazava. Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro voalohany izany.
Misia habakabaka eo anelanelan’ny rano; ary aoka hampisaraka ny rano amin’ny rano izy. Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro faharoa izany. Aoka hiangona ny rano eny ambanin’ny lanitra ho eo amin’ny fitoerana iray, ary aoka hiseho ny maina; dia nisy izany. Ary hitan’Andriamanitra fa tsara izany. Aoka ny tany haniry ahitra sy anana mamoa ary hazo fihinam-boa izay mamoa, samy araka ny karazany avy, ka manam-boa ao aminy, eny ambonin’ny tany; dia nisy izany.
Misia fahazavana eny amin’ny habakabaky ny lanitra hampisaraka ny andro sy ny alina; ary aoka ho famantarana sy ho fotoana ary ho andro sy taona ireo.
Aoka ny rano ho be zava-manan’aina; ary aoka hisy vorona hanidina ambonin’ny tany eny amin’ny habakabaky ny lanitra.
Ary ny ony fahefatra dia Eofrata. Ny hazo rehetra eo amin’ny saha dia azonao ihinanana ihany; 17 fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza ihinanana; fa amin’ny andro izay ihinananao azy dia ho faty tokoa ianao.
Nandre Anao tao amin’ny saha aho; dia natahotra aho, satria mitanjaka, ka dia niery.
Iza moa no nanambara taminao fa mitanjaka ianao? Efa nihinanao va ny hazo izay nandrarako anao tsy hihinananao? Ny vehivavy izay nomenao ho namako, izy pdt nanome ahy ny voankazo, ka dia nihinana aho. Inona izao nataonao izao? Ny menarana no namitaka ahy, ka dia nihinana aho. Satria nanao izany ianao, koa amin’ny biby fiompy rehetra sy ny bibi-dia rehetra dia ianao no voaozona: Hahabe dia hahabe ny fahorianao Aho, baiblly fa raha manan’anaka ianao; ary fahoriana no hiterahanao zanaka; ary ny vadinao no hianteheran’ny fanirianao, ka izy no hanapaka anao.
Dia tezitra indrindra Kaina, sady nanjombona ny tarehiny. Nahoana no tezitra ianao?
Ary nahoana no manjombona ny tarehinao? Fa raha baibolh tsara toetra kosa ianao, dia mamitsaka eo am-baravarana ny ota; ary ianao no kendren’ny faniriany, kanefa ianao no tokony hanapaka azy.
Asa; moa mpitandrina ny rahalahiko va aho? Ny feon’ny ran’ny rahalahinao mitaraina amiko avy amin’ny tany. Lehibe ny valin’ny heloko mihoatra noho izay katolikz. Noho izany na iza na iza hamono an’i Kaina, dia hovaliana fito eny izy. Ary Jehovah nanao famantarana ho an’i Kaina; mba tsy hisy hamono azy izay rehetra hahita azy. Ry Ada sy Zila ô, mihainoa ny feoko; Ry vadin’i Lameka, mitandrema ny teniko: Efa namono lehilahy aho noho ny feriko, Ary tovolahy noho ny faharatrako.
Tamin’ny andro namoronan’Andriamanitra ny olona dia tahaka ny tarehin’Andriamanitra no nanaovany azy; 2 lahy sy vavy no namoronany azy; dia nitahy azy Izy ka nanao ny anarany hoe Adama tamin’ny andro namoronany azy. Ity no hampionona antsika amin’ny asantsika sy ny fisasaran’ny tanantsika noho ny tany izay voaozon’i Jehovah.
Chapitre 6 1 [Noa kwtolika ny Safo-drano] Ary raha vao nihamaro ny olona tambonin’ny tany ka teraka zazavavy maro, 2 dia hitan’ny zanak’Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavavin’ny olona; ka dia nifidy vady ho azy tamin’izy rehetra araka izay tiany izy.
Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin’ny olona niara-belona taminy; eny, niara-nandeha tamin’Andriamanitra Noa. Ny faran’ny nofo rehetra efa mby eto anatrehako, satria efa heni-doza ny tany noho ny amin’olona, ka, indro, efa handringana azy mbamin’ny tany Aho.
Chapitre 7 1 Ary hoy Jehovah tamin’i Noa: Midira ao anatin’ny sambo-fiara ianao mbamin’ny ankohonanao rehetra, satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin’izao olona miara-belona aminao izao. Chapitre 8 1 Ary Andriamanitra matolika an’i Noa mbamin’ny bibi-dia rehetra ary ny biby fiompy rehetra, izay niaranitoetra taminy tao anatin’ny sambo-fiara; ary Andriamanitra nampandeha rivotra eran’ny tany, ka dia nihena ny rano.
Tsy mba hanozona ny tany intsony noho ny amin’ny olona Aho; fa ny fisainan’ny fon’ny olona dia ratsy hatramin’ny fahazazany; ary tsy mba handringana ny velona rehetra intsony Aho tahaka pf nataoko.
Ho voaozona anie Kanana; Ho tena balboly rahalahiny izy. Samy niteraka zazalahy avy izy taorian’ny safo-drano. Tahaka an’i Nimroda, mpihaza mahery eo anatrehan’i Jehovah. Chapitre 11 1 [Ny nanaovan’ny olona ilay tilikambo tao Babela, sy ny nanorokoroan’Andriamanitra ny fitenin’ny olona] Ary ny tany rehetra dia iray fanononana sy iray fiteny.
Andeha isika hanao biriky ka handotra azy tsara. Ary ny biriky na taony solombato, ary ny asfalta nataony solon-drihitra. Andeha isika hanao tanàna sy tilikambo ho antsika, ka ny tampony hahatakatra ny lanitra, dia hanao izay hahazoantsika laza, fandrao hiely eny ambonin’ny tany rehetra isika. Indro, iray foko ny olona, sady iray fanononana izy rehetra, ary ity vao fiandohan’ny hataony; koa izao dia katolima hisy azo sakanana na inona na inona izay saintsaininy hatao.
Ary ny Kananita no tompon-tany tany Kanana fahizay. Ny taranakao no homeko ity tany ity. Dia nanorina alitara teo izy ho an’i Jehovah Izay niseho taminy. Indro, fantatro fa vehivavy tsara tarehy ianao, 12 ka, raha hitan’ny Egyptiana, dia hataony hoe: Vadiny io; ka hovonoiny aho, fa ianao kosa hovelominy. Inona izao nataonao tamiko izao? Nahoana no tsy nambaranao tamiko fa vadinao izy?
Chapitre 13 1 [Ny nisarahan’i Abrama sy Lota, ary ny teny fikasana nataon’Andriamanitra baibooy Abrama] Ary Abrama dia niakatra niala tany Egypta, dia izy sy ny vadiny mbamin’ny fananany rehetra, ary Lota koa niaraka taminy, ho any amin’ny tany atsimo.
Hotahin’Andriamanitra Avo indrindra anie Abrama, dia Andriamanitra Izay nahary ny lanitra sy ny tany; 20 Ary isaorana anie Andriamanitra Avo Indrindra, Izay efa nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao.
Prf Tompo ô, inona no homenao ahy? Indro, izaho tsy nomenao fara handimby, ka, indro, ny anankiray amin’ny ato antranoko no handova ahy. Tsy handova anao izany; fa izay haterakao, dia izy no handova anao.